आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site – Page 155 – Information Communication & Technology Blog from Nepal
दीपावलीमा घरका कुन कुन ठाउँमा दिप जलाउदा लक्ष्मी प्रसन्न भई धनधान्य बनाउछिन्
November 10, 2015	स्वास्थ्य/ज्ञान0745
दीपावलीको रात लक्ष्मीलाई पाउन र लक्ष्मीलाई खुशी पार्नको लागि सबैभन्दा राम्रो र उत्तम समय मानिन्छ । यस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वीमा भ्रमण गर्न आउने र जहाँ जहाँ निश्वार्थ भक्तिका साथ स–सम्मानका साथ आफ्नो पुजा अर्चना भएको छ त्यहाँ त्यस्ता भक्तकहाँ प्रवेश गर्छिन् भन्ने परम्परागत धार्मिक मान्यता रहेकोले धेरै जसो मानिस ...
शरीरका कुन कुन अंग फरपराए लाभ तथा हानी हुन्छ जानी राखौ
November 10, 2015	स्वास्थ्य/ज्ञान0755
महिला र पुरुषको अंग फर्फराउनुको अर्थ भिन्न भिन्न हुने गर्दछ । आउनुहोस्, यस बारे विस्तृत जानकारी लिऔं । – यदि महिलाको दायाँ आँखा फर्फराएमा शुभ समाचार सुन्न पाइन्छ भने पुरुषहरुको बायाँ आँखा फर्फराउनु राम्रो मानिन्छ । महिलाको बायाँ आँखा फर्फराउनुको अर्थ उनको परिवारमा कुनै सदस्य बिरामी हुनु हो । – ...
आमाको श्रापका कारण छोराहरु छोरीभन्दा कम बाँच्ने गरेको वैज्ञानिकहरुको दाबी
November 10, 2015	स्वास्थ्य/ज्ञान0655
महिलाहरु पुरुषभन्दा कमजोर हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । यद्यपि पुरुष भन्दा महिलाहरुको औषत आयु तथा संख्या पनि सामान्य रुपमा बढि नै हुन्छ । महिलालाई कमजोर लिंगी ठानिने तर उनीहरु बढि दीर्घजिवी हुने यो विरोधाभाषको कारण के होला ? वैज्ञानिकहरुले यो विषयमा गहन अध्ययन गरेर गुह्य कुरा पत्ता लगाएका छन् । ...
धन लाभ हुने २१ वटा शुत्रहरु यस्ता छन्
November 10, 2015	स्वास्थ्य/ज्ञान0857
हिन्दु धर्ममा शुभ र अशुभको पुरानो मान्यता अझैपनि जिवितै छ । विभिन्न संकेतका आधारमा शुभ र अशुभका बारेमा जान्न सकिन्छ । त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्ययम हो । केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त ...
लौ पढ्नुहोस् ३९ श्रीमतीका धनी पुरुष कस्ता छन्
November 10, 2015	Real Story0636
भारत मिजोरमको भक्तवाङ्गका एक यस्ता पुरुष छन्, जसको परिवारमा ३९ जना श्रीमती छन, तर सबै खुशी खुशी । भारत बारकोफ्टाका ड्याड जिओनाको साथमा अहिले ३९ वटा श्रीमती मात्र छैनन, ९४ जना छोराछोरी, १४ जना बुहारी र ३३ जना नातिनातिना पनि छन् । सबैभन्दा रमाइलो त के छ भने यी सबै एउटै ...
November 10, 2015	आइसिटी रिपोर्ट, स्वास्थ्य/ज्ञान0997
यदि तपाइँलाई कसैले नदेखिने नम्बर अर्थात अननोन नम्बरबाट फोन गरेर हैरान पारेको छ भने चिन्ता नगर्नुस् । नम्बर पत्ता लगाउने तरिका कठिन छैन । स्मार्ट फोनको आजको युगमा एप्सको कमि छैन । प्राइभेट कलर वा नदेखिने नम्बर पत्ता लगाउन कुनै ट्रिक जरुरी छैन यसलाई इन्टरेनेटमा पाइने सफ्टवेयर र एप्स भए ...
November 10, 2015	समाज खबर0630
चीनले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हुँदै नेपालसम्म रेलवे निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। चीनले सगरमाथा छेडेर सुरुङमार्गमार्फत काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो। नेपालकै प्रस्तावअनुसार चीनले सगरमाथामा सुरुङ बनाएर सन् २०२० सम्म नेपालसम्म रेल ल्याउने तयारी गरेको चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम चाइना डेलीले बुधबारको अंकमा लेखेको छ। तिब्बतको रेलवे सेवाले ...
नयाँ घर बनाउदै हुनुहुन्छ भने सरकारले भर्खर ल्याएको यो आचारसंहिता एकपटक पढ्नुहोु्स्
November 9, 2015	स्वास्थ्य/ज्ञान0609
काठमाडौ । सरकारले नयाँ घर निर्माणका लागि मापदण्ड पारित गरेको छ । मापदण्ड नआउँदासम्म सरकारले वैशाखको भूकम्पयता घर बनाउन रोक लगाएको थियो । मापदण्ड तय नहुँदासम्म नागरिकले ६ महिनासम्म घर बनाउन पाएका थिएनन् । निजीस्तरबाट पुननिर्माणका कामसमेत हुन सकेका थिएनन् । सरकार आफैंले पनि पुननिर्माण प्राधिकरण गठन नगर्दा यससम्बन्धी काम ...
किन बढ्दैछ साइबर अपराध ?
November 9, 2015	आइसिटी रिपोर्ट, साइवर क्राइम0718
मनोज र कविता विगत तीन वर्षदेखि एउटै कलेजका मिल्ने साथी हुन्। अध्ययनकै क्रममा उनीहरूबीच प्रेम मौलायो। जब कविताको विवाह अर्कैसँग हुने निश्चित भयो त्यसपछि मनोजले नक्लली फेसबुक एकाउन्टमार्फत कवितालाई विभिन्न किसिममा अश्लील सन्देश पठाउन थाले। अश्लील अडियो आउन थालेपछि कविताले प्रहरीमा उजुरी दिइन्। अनुसन्धानपछि मनोजले पठाएको पत्ता लग्यो। यस्तै उजुरी ...